“ငါတို့ က မင်းတို့ ထက်တောင် အခြေအနေဆိုးသေးတယ်” | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » “ငါတို့ က မင်းတို့ ထက်တောင် အခြေအနေဆိုးသေးတယ်”
“ငါတို့ က မင်းတို့ ထက်တောင် အခြေအနေဆိုးသေးတယ်”
Posted by phone_kyaw on Sep 29, 2012 in Copy/Paste |9comments
ဂျော့ ဆိုးရော့စ်နဲ့ ဘီဂိတ်တို့ ရဲ့ ဓနအင်အားက မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ နိုင်ငံရေးကို ပြောင်းလဲလို့ ရသလို….ပြည်တွင်းစစ်ကြီးအောင်လည်း ဆွပေးလို့ ရတဲ့ အခြေအနေဖြစ်နေပြီ။
ဖဘ ပေါ်မှာဖတ်ရ တုန်းက အလွန် နှစ်သက်ခဲ့ရတဲ့ စာစုကို ရွာထဲမှာ ပြန်တင်ပေးလို့
ခင်ဗျားအတွေးအခေါ်တွေ အရေးအသားတွေ တစ်မျိုးတော့တစ်မျိုးပဲဗျ။ဆန်းတယ်
ခံစားပီးရေးချင်သလိုရေးချပလိုက်တာပဲ အဲလိုထင်တာပဲကျုပ်ကတော့ ကောင်းပါတယ်။လူအများရှေ.မှာအထင်
ကြိုက်တယ် ဒီလိုပိုစ့်လေးတွေ ဆက်ရေးနေပါကိုဘုန်းကျော်ရေ အမြဲအားပေးနေပါတယ်။
ကိုယ်မှန်တယ်ထင်တာကို အမှန်အတိုင်းပြောဆိုရေးပြပေးနိုင်တဲ့ ကိုဘုန်းကျော်ရေ ဘရာဗိုပါ။
ဟိုးအရင် အနောက်ကလူတွေ အရှေ့ကို နယ်ချဲ့ရတဲ့ ယေဘုယျ အကြောင်းအရင်းကတော့
G ( Gold, God, Glory )သုံးလုံးလို့ကြောင့်လည်း ပြောလေ့ရှိတယ်။ Gold ဆိုတဲ့ သယံဇာတတွေကို မက်မောလို့ God လို့ပြောကြတဲ့ ဘာသာရေးအတွက် သာသနာပြုချင်လို့Glory ဆိုတဲ့ ဂုဏ်တွေ အာဏာတွေကို ဖြန့်ကျက်ချင်လို့လို့လဲ ဆိုကြတယ်။
ဘယ်လိုကြောင့်ပဲ နယ်ချဲ့ နယ်ချဲ့ ခေတ်သစ်နဲ့ ခေတ်ဟောင်း နည်းနည်း ပဲ ကွာတယ်။ ခုတောင် လက်နက်မကိုင်ပဲ နယ်ချဲ့ခဲ့ကြလို့ ကမ္ဘာကြီးကိုတောင် ရွာကြီးလို့ သမုတ်နေကြသေးတာပဲ။
“မင်းတို့ မြန်မာတွေ ၀က်သားစားတာစောတယ်တဲ့” …..မွတ်စလင်တွေကပြောတာ….:D
(သူများတွေ ပြောင်းတာ မပြောင်းတာထက် ငါ့လူပဲ ဂရုစိုက်ပါ တစ်ခါခါကျ ဘု့တော တစ်ခါခါကျ အမှန်ပြော နဲ့ အကောင်းမြင် ဝါဒလေးနဲ့ ကြည့်စမ်းပါ မြန်မာပြည်ကို.. အရင် ပိုစ့်က တင်ခဲ့သလိုမျိုး အမေစု့ ဘာနဲ့စား ပြီးနှိုင်ငံရေး လုပ်နေလဲ ဆိုတာပေါ့ မပြောခင် ကို့ယ်မေးခွန်းလေးကိုယ် စဉ်းစားပြီး မှ့ ပြောတာ ကောင်းတာပေါ့ သြဇီလို သာအစစအစဉ်ပြေမယ်ဆိုရင် ဇနီးမွန်မလေးကို လက်တွဲပြီး ပအိုင့်တပိုင်း မြန်မာတပိုင်း ကလေး ၃ ယောက်အဖေစော်ချောချောလေးမြင်ရင် ငမ်းကျောထတတ်တဲ့ ကဖုန်းကျော်လည်း မြန်မာပြည်မှာ နေချင်တာပဲ မဟုတ်လား….) ကြိုက်လိုဖတ်တာတော့ မဟုတ်ဘူးနော် တင်ထားတာတွေ့လို့ ဖတ်တာ
ပဲပြုပ်ရောင်းတဲ့ အဖွားကြီးတစ်ယောက် ကနေပြီး သူဌေးအဖွားကြီးတစ်ယောက်ကို
အတင်းတုတ်တာလား ဘာလားတော့ မသိ
အဲ့သည်ကောင်မ အရင်တုန်းက ငါ့အိမ်ရှေ့ကားဂိတ်နားက ဗံဒါပင်အောက်မှာ ဘိန်းမုန့်ဖုတ်ရောင်းတာပါ
( သူဆိုလိုတာက အလျှင်တုန်းက သူက လမ်းမတန်းကားဂိတ်နားအိမ်ရှိတယ် ခုတော့ ဘယ်မှာနေပြီး
ဂေဇက်ရဲ့ ပေါ်လစီအရ ဘယ်သူနဲ့မှ မတူအောင် တစ်ခုတော့ ဝေဖန်ရရင်
နယ်ချဲ့တွေကို ထမင်းငတ်လို့ နယ်ချဲ့တဲ့သဘောဖြစ်နေတယ်လို့ ပိုစ့်ကအဓိပ္ပါယ်မသက်ရောက်နေဘူးလား
ကိုယ်က လေးမြှားဘဲ ကိုင်နိုင်သေးတဲ့အချိန်မှာ
သူက ရေမြေခြားကလာပြီး သေနတ်တွေအမြှောက်တွေနဲ့လာတယ်လို့ဆိုနိုင်တဲ့အတွက်
ကိုယ်အသုံးမကျတာကိုဘဲ ကျပ်ကျပ်ပြောပါ မောင်ဘုန်းကျော်ရာ
ဒါ ကျုပ်က အကြမ်းဘဲပြောတာပါ
နည်းနည်းအနုစိတ်လိုက်ရင် ဘာသာရေး နှစ်တစ်ထောင်ကျိန်စာဆိုပြီး ဟိုသဂျီးက ထလုပ်နေဦးမယ်